Deepin 20.2.3 inosvika neOCR chishandiso uye yakavakirwa paDebian 10.10 | Linux Vakapindwa muropa
Deepin 20.2.3 inosvika neOCR chishandiso, chakavakirwa paDebian 10.10 uye zvakawanda zvinogadziriswa muDDE
Iyo desktop (DDE) inoitwa seimwe yeakanyanya kutaridzika kune ayo anowanikwa muLinux, uye chokwadi ndechekuti vane zvikonzero zvacho. Asi, kunyangwe isinganyanyo shandiswa kunze kweChina, iri zvakare Debian-based operating system, kunyangwe nehunyanzvi iri zvakapesana: izwi rinodaidza sisitimu inoshanda pane desktop. Ngatishandisei chero zvatinoshandisa, nhau dzanhasi ndedzekuti yakatangwa Deepin 20.2.3, vhezheni itsva yeiyo inoshanda system inosvika isingasviki mwedzi miviri mushure the 20.2.2.
Pakati pezvinhu zvayo zvitsva, zvinoratidzika kuti Deepin 20.2.3 ikozvino yakavakirwa paDebian 10.10, iyo yakagadzirisa zvese LTS kernel (5.10) uye yakagadzika (5.12, iyo yatosvika kumagumo ehupenyu hwayo) uye zvakawanda zvinogadziriswa muDDE, zvese zviri munzvimbo yemifananidzo uye mukushandisa kwayo. Pazasi iwe une runyorwa rwakakwana rwavakatipa isu mune chinyorwa cheiyi kuburitswa.
1 Nhau dzeDepin 20.2.3
Nhau dzeDepin 20.2.3
Linux 5.10.50 LTS uye Linux 5.12.18 yakagadzikana.
Iyo Capture Turu uye Image Viewer yawedzera OCR rutsigiro.
Ndakagadzirisa repository kune Debian 10.10.
Mifananidzo yekushandisa yakagadziridzwa.
Mune mbiri inoratidzira yakatambanudza modhi, mushure mekudhonza hwindo kuenda pakati pechiratidziro chechipiri uye kuridonhedza, kudhonza hakugone kuenderera.
Mahwindo akadhonza achienderera kunyangwe mushure mekuburitsa bhatani rembeva.
Kana chikamu chehwindo chakange chisiri pachiratidziri, mushure mekumisa kana kudzima maitiro ewindows uchishandisa mapfupi, chinzvimbo chewindow chakachinja.
Mushure mekuvhura akawanda maapplication, uchishandisa Alt + Tab kuchinjira kudesktop, uchimanikidza Alt + Tab zvakare kushandura zvinoshandiswa, kudzvanya isina chinhu nzvimbo, yekutanga nyika haina kudzoreredzwa.
Iyo "Super + Shift + Nhamba" nzira pfupi yakaramba ichishanda pakanga pasina zvigunwe zvewindow mumaonero emazhinji.
Mukuona kwakawanda, mapfupikiso e "Super + Shift + Number" haana zvaakaita kana thumbnail yewindow yakasarudzwa.
Kunetsana kuri pakati pe-deepin-icon-theme uye browser.
Iko kuratidzwa kusingaenzanisike kwenzvimbo yekuzivisa yepaneru.
Iyo yekubatanidza interface yakavharwa kwemaminetsi matatu nekuda kwepaswedi dzakaipa, asi ipapo zvigunwe zvemunwe zvaisagona kushandiswa kuivhura.
Kana chigunwe chisina kukodzera kana pasiwedhi risiri iro rakaiswa kuti upinde muakaundi isina kunyoreswa, zvikanganiso zvekuratidzira kune imwe account isina kunyoreswa zvakaratidzwa.
Yakagadziridza iyo yekumisikidza kurongedza kusimudzira yekudyidzana ruzivo.
Paive pasina kukanganisa kwekuzivisa kana iyo password yakadzokororwa yanga isingaenderane neiyo nyowani nyowani.
Iyo account haigone kudzimwa zvinobudirira.
Pakabatanidzwa headset yeBluetooth, ruzha rwakachinja kubva paa2dp modhi kuenda pamahedhifoni maitiro; uye kana uchidzokera kumashure kune a2dp modhi, "Noise Suppression" yakaratidzwa pane yekuisa interface.
Mushure mekuchinja mitauro murondedzero yemitauro, apo ndakamirira chiziviso chekubuda, pandakadzvanya "Gadzirisa" ipapo, pakanga paine madenderedzwa asina chinhu pamberi pemabhatani ekudzima emitauro isina kusarudzwa.
Paunenge uchitsvaga "General" mubhokisi rekutsvaga, sarudzo "Keyboard neMutauro -> General" haina kuoneka mune yekudonha-pasi bhokisi.
Wakawedzera marongero ekuratidzira kwakawanda mumenu yemamiriro edoko.
Mushure mekubatanidza yekunze VGA kuratidza, mukopi modhi, kumisikidza resolution kusvika 1024 × 768, uyezve kutenderedza kuratidzwa, dhoko rairatidza zvisiri izvo.
Kana kuratidzwa kwechipiri kwakabatanidzwa kune DP chiteshi kekutanga, kumisikidzwa kuteedzera modhi, zvizere-skrini zvikumbiro zvaive kunze kwedoko.
Yakawedzerwa: Mune yakazara skrini mode, chinzvimbo chemutangi chakachinja mushure mekuisa application.
Range kana uchitsvaira mune yakazara skrini mode yakagadziridzwa.
Yakagadziriswa hapana echikwata mazita mune yakazara skrini mode.
Dai paive nevashandisi vazhinji muchirongwa, password yakachengetedzwa yemushandisi A mubrowser inogona kutumirwa kunze kwekusimbisa password yekuwana yemushandisi B.
Bhurawuza rakadonha mushure mekutora screenshots mu password yechokwadi pop-up interface uye nekuchengetedza iwo masikirini.
Iyo password yechokwadi pop-up bhokisi yakanyangarika uye yanga isingawanikwe mushure mekuchinja kune desktop.
Deepin 20.2.3 yave kuwanikwa kubva ku official link, OSDN, Google Drive y Torrent, asi kurodha pasi kwese kungangononoka. Kana iwe usiri kuda kushandisa Deepin Linux uye hongu DDE, nhau dzichauya nekukurumidza, semuenzaniso, ku Manjaro, sarudzo inokurudzirwa kuti ive nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Deepin 20.2.3 inosvika neOCR chishandiso, chakavakirwa paDebian 10.10 uye zvakawanda zvinogadziriswa muDDE
Ndakave nezvakashata zvakasangana na Deepin; matambudziko neLatin American keyboard, software inochengeta zvese muChinese, isinganzwisise radish. Zvakare nenharaunda mbiri dzakasimba kwazvo dzeTeregiramu. Ndiri kufara kuti deepin inoenderera mberi nekuvandudzwa kwayo asi ini handina kana basa nekuiyedza, kurodha pasi, kana kurikurudzira kune chero munhu
Manjaro 21.1 (uye 2021-08-17), iyo yekutanga ISO yesisitimu inoshanda neGNOME 40 yave kuwanikwa, pakati pezvimwe zvakawanda zvitsva